रंगेहात यस्तो अवस्थामा नेपालीसहित एक भारतीय थानकोटबाट समातिए ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > रंगेहात यस्तो अवस्थामा नेपालीसहित एक भारतीय थानकोटबाट समातिए !
रंगेहात यस्तो अवस्थामा नेपालीसहित एक भारतीय थानकोटबाट समातिए !
रंगेहात एक भारतीय नागरिक समातिएका छन् । थानकोट प्रहरीले एक जना भारतीय नागरिकलाई समातेको हो । उनको साथबाट १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नगद बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार भारतीय नागरिक ३० वर्षीय अमितकुमार गुप्तालाई कपिलवस्तुबाट काठमाडौं आउने क्रममा नागढुंगाबाट पक्राउ गरिएको हो ।
उनी सवार गाडी चालक नेपाली नागरिक २२ वर्षीय संगम थारुलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । गाडीमा राखिएको झोला खानतलासी गर्दा स्रोत नखुलेको उक्त रकम भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । दुवै जनालाई दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिने प्रहरीको तयारी रहेको छ ।
वि.सं.२०७७ पुष २१ गते मंगलवारको हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य !
मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झर्नासाथ सबैतिर कसरी वितरण गर्ने यस्तो योजना तयार !